Niyad Jab: Xiddig Ay Arsenal Ku Rajo Weynayd In Ay Adeegiisa Hesho Bishan Oo Si Cad U Diiday Gunners – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta Niyad Jab: Xiddig Ay Arsenal Ku Rajo Weynayd In Ay Adeegiisa Hesho Bishan Oo Si Cad U Diiday Gunners
Niyad Jab: Xiddig Ay Arsenal Ku Rajo Weynayd In Ay Adeegiisa Hesho Bishan Oo Si Cad U Diiday Gunners
January 18, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxda Arsenal ayaa la kulantay niyad jab kadib markii xiddig ay doonaysay in ay la soo saxiixato ka hor inta uuna suuqa January xirmin Si Rasmi ah u diidin dalabkii ay ka gudbiyeen sida ay sheegayaan wararka ka imanaya dalka England.
Rajadii ay kooxda Arsenal ka qabtay saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Bordeaux ee Malcom ayaa la kulantay dhirbaaxo kadib markii xiddiga reer Brazil diiday dalabkii ay u soo bandhigeen.
Gunners ayaa ku jirta wakhti xasaasi ah iyada oo is badal weyn ku samaynaysa kooxdeeda xilli Alexis Sanchez uu ku sii dhawaanayo kooxda Man United iyada oo la filayo in ay xiddigo cusub keento.
Konstantinos Mvaropanos ayaa durba Arsenal kaga soo biiray kooxda reer Greek ee PAS Gianina xilli ay sidoo kale kooxdu ka shaqaynayso soo afjarista heshiisyada Pierre-Emerick Aubameyang, Henrikh Mkhitaryan Iyo Malcom.
Arsenal ayaa la rumaysan yahay in ay u baahan yihihiin ugu yaraan laba xiddig oo weerar ah si ay u buuxiyaan booska uu banayn doono Sanchez laakiin The Times ayaa sheegaysa in qorshahaasi uu bur-buray kadib markii Malcom diiday Heshiiskii ay Gunners hordhigtay.
Waxa intaa sii dheer xilli ay Arsenal ku kalsoontahay in ay 44 milyan ku heli doonto xiddiga Kooxda Bordeaux ayaa si cad u sheegtay in aanu xiddigan iib ahayn bishan.